MR MRT: သာသနာရေး လျှောက်ထားလွှာ
[သာသနာတော် အဆင့်အတန်း မြင့်မားမှုသည် နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ဖော်ညွှန်းနေ]
“ရိုသေလေးစားရပါသော ဆရာတော် သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့ ဘုရား . . . . .
အရှင်ဘုရားတို့ သီတင်းသုံးတော်မူရာ ကျောင်းတိုက်အသီးသီးသို့ ကိုယ်တိုင် မလာရောက်နိုင်သည့်အတွက် တောင်းပန်စကား လျှောက်ထားရင်း၊ ရဟန်း သာမဏေ သီလရှင် သူတော်စင်များအားလုံး မင်္ဂလာအပေါင်း ခညောင်းပြီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေဟု ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည် ဘုရား . . . . .။
သာသနာတော်သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကို လွှမ်းမိုးမှု၊ သြဇာသက်ရောက်မှု ကြီးကြီးမားမား ရှိနေသည့် အင်အားဖြစ်ကြောင်း အရှင်ဘုရားတို့ သိတော်မူကြပါသည် ဘုရား။ အထူးသဖြင့် သာသနာရေး အဆုံးအမတို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဂန္ထ၀င်တွင်သည်အထိ လူသားတို့၏ ရင်ထဲ၌ စွဲမြဲစွာ တည်နိုင်ပါသည် ဘုရား။ ယနေ့ (၂၁)ရာစု ကမ္ဘာ၌ သာသနာရေးသည် ကိုးကွယ်ရာသက်သက် မဟုတ်တော့ဘဲ နိုင်ငံတို့၏ Soft Power အဖြစ် ရောက်ရှိလာနေပါပြီ ဘုရား။
သာသနာရေး ဟောပြောချက်များ၊ ပို့ချချက်များ၊ ကျင့်သုံးမှုများ၊ စကားလုံးများ၊ အမူအရာများ၊ သတင်းစကားများသည် သက်ဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကြန်အင်လက္ခဏာတို့ကို ကိုယ်စားပြုနေပြန်ပါသည် ဘုရား။ သာသနာတော်မှ သက်ရောက်သည့် ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်း၊ သမိုင်းကြောင်း၊ လူ့တန်ဖိုးတို့သည် လူ့သမိုင်းနှင့်အတူ ကျန်ရစ်နေပါသည် ဘုရား။ အထူးသဖြင့် . . . လူငယ်လူရွယ်တို့အပေါ် အထူးတလည် သြဇာကြီးမားခြင်းကြောင့် သာသနာ့ဝန်ထမ်း အရှင်မြတ်တို့၏ တာဝန်သည် အလွန်ပင် ကြီးမားလှပါသည် ဘုရား။ သံဃာတော်တို့ ထုတ်ဆောင်ဟောကြားအပ်သည့် စံပြပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် လူငယ်တို့၏ စိတ်ကူးထဲက စံပြုပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်နေတတ်ပါသည် ဘုရား။ စံပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အမူအရာတို့သည် လူငယ်တို့၏ စိတ်ထဲ၌ စွဲစွဲထင်ထင် နစ်ဝင်နေတတ်ပါသည် ဘုရား။
ယခုအခါ၌ တပည့်တော်တို့၏ နိုင်ငံသည် ပြည်သူလူထုအတွက် အပြောင်းအလဲများကို အကောင်းမွန်ဆုံး ဆောင်ကြဉ်းနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါသည် ဘုရား။ ယခုကဲ့သို့သော သမိုင်းဝင် အလှည့်အပြောင်း အခြေအနေ၌ အရှင်မြတ်တို့၏ ပံ့ပိုးမှုသည် အမှန်ပင် အရေးကြီးနေပါသည် ဘုရား။ ပြောင်းလဲမှု ဟူသည်မှာ လူထု၏ စိတ်ဓာတ်ကို ပြောင်းလဲရခြင်း ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။ စိတ်ဓာတ်တော်လှန်ရေးနှင့် အပြောင်းအလဲကို ဖော်ဆောင်နေရခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။ တပည့်တော်တို့၏ နိုင်ငံ၊ တပည့်တော်တို့၏ ပြည်သူများအတွက် သံဃာတော်တို့၏ သွန်သင်မှု၊ ဆန်းသစ်တိုးတက်မှုတို့ အရေးကြီးသည့် အချိန်အခါ ရောက်ရှိနေပါပြီ ဘုရား။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ စိတ်ဓာတ်၊ အမူအကျင့်တို့ကို သံဃာတော်တို့က Soft Power တစ်ရပ်ဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်စွမ်း ရှိတော်မူကြပါသည် ဘုရား။
ရွေးကောက်ပွဲများမှတစ်ဆင့် ဒီမိုကရေးစီ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိလာနိုင်ရန် ပြည်သူတို့အပေါ် ထားရှိတော်မူကြသည့် သံဃာတော်တို့၏ မေတ္တာ၊ ကရုဏာတို့ကို တပည့်တော်တို့ အစိုးရအဖွဲ့က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ယခုကဲ့သို့ အခွင့်သင့်ခိုက်မှာ ရိုသေစွာဖြင့် အလေးအနက် လျှောက်ထားလိုပါသည် ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ လက်ရှိကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး ပန်းတိုင်ဆီသို့ ပြည်သူများ လျှောက်လှမ်းရာ၌ သံဃာတော်တို့ အနေဖြင့် များစွာ အထောက်အကူ ပေးတော်မူနိုင်ပါသည် ဘုရား။ သာသနာတော် တိုးတက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး၊ သာသနာတော် အဆင့်အတန်း မြင့်မားမှုသည် နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ဖော်ညွှန်းနေပါသည် ဘုရား။ တပည့်တော်တို့၏ နိုင်ငံ၊ တပည့်တော်တို့၏ တိုင်းရင်းသားများ၊ တပည့်တော်တို့၏ လူငယ်များအတွက် အားလုံးက အများကြီး ကြိုးပမ်းကြရဦးမည် ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။ မတူကွဲပြားခြင်းများ ပိုမိုပြီး ကြီးမားလာ၊ ကျယ်ပြန့်လာသည့် အခြေအနေတို့ကို တပည့်တော်တို့ ပြန်လည်ပေါင်းစည်း ပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားကြရဦးမည် ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။ ခေတ်အဆက်ဆက် ပျောက်ဆုံးနေသည့် ညီညွတ်ရေးကို ပြန်လည် တည်ဆောက်နိုင်ရန် တပည့်တော်တို့ ကြိုးစားကြရဦးမည် ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။ မငြိမ်းချမ်းသေးသည့် နယ်မြေဒေသတို့၌ နေရပ်စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်နေရရှာသည့် ပြည်သူများအတွက် (၂၁)ရာစု ပင်လုံညီလာခံကို တပည့်တော်တို့ အကောင်အထည်ဖော် ကြိုးပမ်းနေပါသည် ဘုရား။ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများ၌ အလုပ်မျိုးစုံ သိမ့်ကျုံးလုပ်ကိုင်နေရသည့် တပည့်တော်တို့၏ ပြည်သူများ အမိနိုင်ငံ ပြန်လာကြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ နေထိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် တပည့်တော်တို့ ကြိုးစားကြရဦးမည် ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။
နိုင်ငံတော် အစိုးရသည် ဤတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ရမည်မှာ မှန်ပါသည် ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ အစိုးရ အနေဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါသည် ဘုရား။ ယနေ့ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသည့် ကမ္ဘာကြီး၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီး ယိုယွင်းပျက်စီးလာနေသကဲ့သို့ လူသားတို့၏ စိတ်နေစိတ်ထားများ ယိုယွင်းပျက်စီး လာနေသည်ကို အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြပါသည် ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုနှင့် ထိုက်တန်သည့် အမျိုးသား ညီညွတ်မှု၊ နိုင်ငံကြီးသားစိတ်ဓာတ်၊ နိုင်ငံကြီးသား အမူအကျင့်၊ နိုင်ငံကြီးသား ယဉ်ကျေးမှုများ အရှိန်အဟုန်နှင့် ဖြစ်ထွန်းလာရေးအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး တစ်မျိုးသားလုံး ကျရာ အခန်းကဏ္ဍမှ ကြိုးပမ်းသွားကြရန် လိုအပ်ပါသည် ဘုရား။
တပည့်တော်မ အနေနှင့် သံဃာတော်တို့ကို လေးလေးနက်နက် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါသည်၊ အကူအညီ တောင်းခံလျှောက်ထားလိုပါသည် ဘုရား။ တပည့်တို့နိုင်ငံ၊ တပည့်တော်တို့ ပြည်သူများ လိုလားတောင့်တနေကြသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ညီညွတ်ရေး နှင့် တိုးတက်ရေးကို ပံ့ပိုးပေးတော်မူကြပါ ဘုရား။ ပြည်သူတို့အကြား ခွဲခြားမှုများ၊ အမုန်းတရားများ ကင်းဝေးပြီး မေတ္တာတရားများ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာရန်၊ အပတ်တကုတ် ကြိုးစားလိုစိတ်များ တိုးပွားလာရန်၊ စာရိတ္တ နှင့် လုံ့လကို အခြေပြုပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်၊ တပည့်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်နေသည့် စိတ်ဓာတ်တော်လှန်ရေးကြီး အောင်မြင်ပြီးမြောက်ရန် တတ်နိုင်သမျှ၊ တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ပံ့ပိုးကူညီပေးတော်မူကြပါဟု အလေးအနက် လျှောက်ထားလိုပါသည် ဘုရား။
နိဂုံးချုပ် အနေဖြင့် သာသနာ့ဝန်ထမ်း သူတော်စင်များ အားလုံး အစဉ်တိုးတက်ဆန်းသစ် အောင်မြင်တော်မူနိုင်ပါစေကြောင်း၊ တပည့်တော်တို့၏ မြန်မာ့လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် သာသနာဝန်ထမ်း အရှင်သူမြတ်များ ဖြစ်တော်မူကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း လျှောက်ထားလွှာကို ပေးပို့ဆက်ကပ်ပါသည် ဘုရား။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာပါ “. . . . . မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့သည့် သ၀ဏ်လွှာ”ကို ဆီလျော်အောင် သာသနာမှု ပြုပါသည်။